Inona no azo lazaina fa antony tsy mampahomby ny fanabeazana
Naseho ny : 28 desambra 2020
Ny atao hoe fanabeazana : dia fikoloina hahatonga ny olona iray ho olombanona izany mikolo ny maha olona, fampivelarana ny vatana, ny saina ary ny fanahy. Ny endrika hamantarana fa nahazo fanabeazana : olona tia mandray andraikitra, mendrika ara-pitondran-tena, manaja ny tenany sy ny hafa. Ny tompon'andraikitra amin'ny fanabeazana dia ny ray aman-dreny no voalohany indrindra, ny mpampianatra, ny fiaraha-monina hotronon'ny haino aman-jery, ary farany dia ny fiangonana. Ny antony mbola mahamaro ny herisetra : Tsy ampy ny fanabeazana sy ny fiomanana ny tanora hirotsaka amin'ny sehatry ny fanambadiana, ny tahan'ny fahantrana. Tsy ampy intsony ny fifandraisana eo amin'ny Ray aman-dreny sy ny zanaka. Mahery vaika ny fanatontoloana sy ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina...
Pejy 6 amin'ny 13